Kuthetha ukuthini ukuphupha udaka okanye udaka? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuphupha ngodaka kunxulunyaniswa nayo yonke into esiba nayo: amava ethu, uloyiko, ukukhathazeka, uthando, uloyiso, ukoyiswa, njl.
Akunjalo ngenxa yento embi enokwenzeka, kuba xa sithetha ngodaka sikhumbula kwangoko ukungcola, iihagu, ubunzima nazo zonke iintlobo zezinto ezingathandekiyo. Kodwa hayi ngokupheleleyo, kunokuthetha ukusombulula iingxaki ezindala kubomi bethu.
1 Ukuphupha ngodaka
2 Ngaba uphuphe ukuba ungcolise umzimba wakho eludakeni?
3 Ngaba uphuphe ukuba uvaleleke eludakeni?
4 Ngaba uphuphe ukuba unceda umhlobo uphume eludakeni?
5 Uphuphe ngodaka olubomvu?
6 Ngaba uphuphe ngodaka olukhanyayo?
7 Ngaba uphuphe ngodaka olumnyama?
Iphupha lodaka ikwafuna ukuba umphuphi aqwalasele imbonakalo yomhlaba oludaka lukulo kunye nemeko yalo. Umzekelo, ukuba udaka lunzima, le ngxaki iya kuba nengxaki enkulu yezempilo enxulumene nawe okanye ilungu losapho lwakho, apho iya kuthi isonjululwe ngokupheleleyo.
Ngaba uphuphe ukuba ungcolise umzimba wakho eludakeni?
Ukuba ephupheni ubunemdaka ngokudibana nodaka okanye nokuba uhambe nje phantsi kwawo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba lwalunjani uvakalelo lwakho ngalo mzuzu ungaqhelekanga. Ukuba nokuba uthe wangcola ubonwabile, ukhuselekile kwaye uchwayitile, oko kuthetha ukuba uyakusoyisa isigulo. Nangona kunjalo, ukuba ulusizi kwaye unxunguphele, ngumqondiso osisilumkiso wokuba ulumke ngakumbi ngempilo yakho. Cinga ngokufumana uvavanyo ukuthintela ukugula okanye ukukubamba kwangoko.
Ngaba uphuphe ukuba uvaleleke eludakeni?
Ukuxinga eludakeni kuneentsingiselo ezimbini ezahlukileyo kakhulu: Eyokuqala ibhekisa kukungalingani ngokweemvakalelo, apho ungathandabuza eyona ndlela yokuqhubela phambili, kwaye oku kunokubangela iingxaki, ngakumbi kwimicimbi enxulumene nothando. Nangona kunjalo, ukuba uziva ukuba kukho ithuba lokubaleka kolo daka, ke ngumqondiso wethamsanqa, nokuba awuphumi kuwo! Kuthetha ukuphela kweengxaki zakho zangoku.
Ngaba uphuphe ukuba unceda umhlobo uphume eludakeni?
Eli phupha linomdla kakhulu kuba kukho indima yokuguqula, oko kukuthi, umphuphi unceda umhlobo aphume eludakeni, kodwa kubomi bokwenyani nguye onokuthembela kuncedo lwalo mhlobo nangawuphi na umcimbi ebomini bakhe. Ngapha koko, ungamjonga lo mhlobo ngothando olutsha, kuba uziva ungumhlobo wokwenene kuwe.
Uphuphe ngodaka olubomvu?
Okanye kwithoni efanayo? Ke luphawu lokuba phakathi kweengxaki ezithile uthando olutsha kunye nolugqithisileyo lunokuvela ngokungalindelekanga.
Ngaba uphuphe ngodaka olukhanyayo?
Kuthetha ukuba iingxaki zakho zangoku zezokwexeshana kwaye ziya kususwa ebomini bakho kungekudala, ngaphandle kwexesha. Yiba nokholo nesibindi, kuba umlo uya kuba mfutshane!
Ngaba uphuphe ngodaka olumnyama?
Kuthetha ukuba iingxaki ojamelene nazo namhlanje zingathatha ixesha ukusombulula ngokufanelekileyo kwaye ezinye izinto, ezilungileyo nezingalunganga, zinokuzijoyina, zikunike umbono omtsha weziganeko kunye nesigqibo sokutshintsha iinkqubo kunye nezimo zengqondo.
Ngokubanzi, ngalo lonke ixesha umntu ophuphayo ezibona ephuma eludakeni, luphawu lokuba uya kuba nakho ukoyisa zonke iingxaki ebomini bakhe!